I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Danielle
Le kotishi ebukekayo ihlanganisa umlingiswa futhi ikwenye yezindawo ezihamba phambili e-Eagle Bay, nje ama-50m ukusuka ogwini oluhle lolwandle.
Izungezwe izihlahla ezinkulu, inesici esithandekayo sehlathi nendawo enkulu, ebheke enyakatho, indawo yokuzijabulisa yangaphandle enendawo yokuphumula engaphandle, elungele izinsuku eziningi zokuvilapha elangeni. Ebusika uzithole ukhululekile ngaphakathi eduze komlilo wezinkuni kuyilapho imvula ishaya ophahleni lukathayela.
Uzothola ipulani elivulekile lokuhlala kanye nendawo yekhishi ngaphambi kwendlu enezicabha zaseFrance eziholela endaweni engaphandle, enamagumbi okulala amabili nendlu yokugezela etholakala ngemuva. Igumbi lesithathu lokulala elikhulu elinombhede wosayizi wendlovukazi litholakala phezulu, endaweni ephakeme evulekile egcwele ukukhanya enompheme wayo wangasese.
Ifenisha ngokunethezeka, le ndlu inomuzwa okhululekile ngokumangalisayo - uzozizwa sengathi useholidini ngempela. Ilungele imindeni kanye nomngane onemilenze emine.
Itholakala osebeni oluhle kakhulu lwe-turquoise e-Geographe Bay, i-Dunsborough kuzodingeka ibe nenye yezindawo ezinokuthula nezinhle kakhulu emhlabeni.
Amanzi acwebile acwebile acwebile namabhishi anesihlabathi esimhlophe aseDunsborough axhunywe edolobheni ngotshani obuluhlaza obuluhlaza nezindlela ezinomthunzi. Kukhona umoya wekhefi omatasatasa kanye nenqwaba yezitolo ezinhle ze-boutique. Ebusuku kukhona i-vibe emnandi enezindlu zotshwala, izindawo zokuphuzela utshwala nezinkantini ezinomculo obukhoma, izindawo zokudlela namakhefi.
Izindlela zomjikelezo ongasebhishi kanye nezindlela zokuhamba ziphenduka umzila wezintaba onqamula epaki lesifunda eduze kwetheku. Njengoba inamabhishi afanelekile okubhukuda futhi iyindawo enhle yokutshuza, i-snorkeling, i-kayaking neminye imidlalo yasemanzini. Kukhona ngisho nezinkundla zegalofu ezimbili!
Ngaphandle endaweni esenyakatho-ntshonalanga kakhulu ekugcineni okuphezulu kwe-Leeuwin-Naturaliste National Park, okungenye yezindawo ezikhangayo zaseDunsborough. Le ndawo iyikhaya le-lighthouse yase-Dunsborough, i-Cape Naturaliste kanye nendawo okuqalwa kuyo i-Cape to Cape Track.
Yakhelwe phezu kwesisekelo sokuntweza kanye namaholide omndeni, leli dolobhana lezokungcebeleka selikhule laba indawo yamaholide ecebile ngokunethezeka nobumnandi, elungele umndeni, abangani, imibhangqwana kanye nabapakishi.
Sizotholakala ukuze siphendule noma yimiphi imibuzo phakathi namahora ebhizinisi nge-imeyili noma ngocingo.
Uma kunodaba oluphuthumayo izivakashi zikhuthazwa ukuthi zishayele ihhovisi ukuze kukhishwe othintana naye eziphuthumayo emshinini wokuphendula.
Uma kunodaba oluphuthumayo izivakashi zikhuthazwa ukuthi zishayele…